Baaq Shacab, Markale Midnimo, Somaliland Loomasina Waa Dhagar Ay Madaxda Somali Talyaani Usoo Dhiibeen Dhuuni Qaatayaasha Si Ay Marlabaad Guryaheena Uburburiyaan :- Qalinkii Eng MOHAMED HAIBE HERIS | Gaaroodi News
Baaq Shacab, Markale Midnimo, Somaliland Loomasina Waa Dhagar Ay Madaxda Somali Talyaani Usoo Dhiibeen Dhuuni Qaatayaasha Si Ay Marlabaad Guryaheena Uburburiyaan :- Qalinkii Eng MOHAMED HAIBE HERIS
May 24, 2020 | Published by: Tifaaftiraha
Amintu waa casar qoraxdu godkeeda ku sii socoto, shalay waxa dagaal dhiig badan ku daatay dhaxmaray dagaal oogayaashii xamar. Goobta waxa fadhiya sh. Xasan daahir aways oo ka mid ahaa dagaal ogayashii maalintaa hore dhiiga badan daadiyay, isaga oo hiinragaya is bidaayana in uu aqoon iyo waayo aragnimo dheer yahay dadka meesha kula sugan, waxa uu ku yidhi nimankii kale oo ay ka mid ahaayeen sh. Shariif oo xilal kala duwan ka ahaa waqtigaas dagaal oogayaasha ,markii dambena noqday madaxwayne dawladii ku meel gaadhka ahayd ee xamar iyo dagaal oogayaal kale oo badan.
Somaliland waa in aynu madaxdhaqameedkooda ,wasiiradooda iibsanaa ,hubkoodana lacag ugu bedalaa si aynu jilbaha dhulka ugu dhigno , mar labaadna dib ugu soo celino xamar. Warkan waxa u ku faafay warbaahinta iyo baraha bulshada.
Ilko yaxaas way midaysan yahiin , farmaajo madaxwaynaha dawlada xamar ,isaga oo u qudbaynaaya dad ka soo jeeda qabiilkiisa magaalada Nayroobi ,caasimada Kinya , hadaladiisii waxa ka mid ahaa : Dadkaan kama adkaan karno ,waxa uu u jeedaa somaliland , waxa kaliya oo aynu uga adkaan karaa inagoo ka soo mara xaga madaxdhaqameedkooda , aqoonyahankooda iyo waxgaradkooda , si aynu jilbaha dhulka ugu dhigno ,marlabaadna xamar dib ugu soo celino. Hadalkan farmaajo madaxwaynaha xamar maaha wax qarsoon , waa hadal uu ku faafiyay warbaahinta iyo baraha bulshada.
Xukuumada somaliland hadii ay noqoto habka loo soo xulo wasiiirada , wasiir ku xigeenada , agaasimayaasha waa hab ku salaysan tan iyo markii ay somaliland ka bilaabantay dawladnimadu qabiil iyada oo la isku dayaayo sidii looga hortagi lahaa ,kalmada ah somaliland loomasina.
Laakiin xilalka oo xadidan awgeed iyo qabiilooyinka raba in ay iska dhex arkaan dawlada oo ka badan ayayna marna suuragal ahayn in qabiilkasta uu wasiir helo . habkan oo aynu ka dhaxalay laba arimood oo kala ah in uu jiraayo qabiil markasta saluugsan xilalka iyo dadka loo soo magacaabayo xilalka dawlada oo markasta tayadoodu hoosayso , musuqmaasuqa iyo in uu qabiilkiisa u noqdo wakiil meesha u fadhiya , cadaaladiina meesha ka baxdo.
Gunaanadkii dawlada madaxwayne muuse biixi si ay jiilasha dambe ugu dhigto dariiq ay maraan waa in habka xilalka loo magacaabayo uu noqdaa mid ka madaxbanaan hab ku dhisan qabiil .
Shakhsiga xil umada u qabanayaa waa in lagu soo xulaa hab ku dhisan aqoonta qofka, kartidiisa , daacadnimadiisa ,wadan jacaylkiisa , taas oo marka qof loo magacaabayo xil , xitaa qoyskiisa dib loo baadhaa , ehelkiisa , markaa hadii uu ehelkiisa qof ka midi uu dawlada xamar u shaqeeyo aan haba yaraatee wax xil ah lagu aaminin.In madaxdhaqameedka laga mamnuuca in ay siyaasada soo dhexgalaan , lana soo saara xeer siyaasada iyo nadaxdhaqamedka kala saaraya.
In waqtiga doorashada laga mamnuuco in dadka u ordaaya in ay umadan hogaankeeda qabtaan ay ololahooda la kaashadaan madaxdhaqameedyada , taas oo ah dan shakhsi , si ninkan raba in uu umada maalkooda iyo maamulkooda gacanta ku dhigo , uu hadana noqdo kii umadan isagoo kursiga ku fuulaaya adeegsado madaxdhaqameed iyo qabiil ,horseedana dildilaac iyo kala fogaansho umadeed ,waxa kaliya ee uu soo kordhiyayna ay tahay isagoo madaxwayne lagu magacaabay iyo wadankii oo galay xaalad burbur.
Mohmed Haybe Hersi